Alfreda Hichkoka ubizwa kufanele kubhekwe omunye wabaqondisi edume kakhulu futhi ethandwa kwekhulu XX. Wadedelwa big screen 55 sici sobude amafilimu, umsebenzi e-UK kusukela buthule ifilimu inkathi ziphethe ekwakhiweni umbala amafilimu eMbusweni omkhulu Hollywood enkulukazi. Ezimweni eziningi, uhlobo of Thriller futhi horror wathwebula Hitchcock: uhlu lwamabhayisikobho ukuthi umphakathi othanda, okwethulwa elandelayo uhlobo sihloko.
Tincenye izimfihlo eliyingozi kanye lezimanga ongaqondakali ukuqukatha wonke amabhayisikobho engcono ka Hitchcock. Uhlu - ezibuhlungu nokuhlupheka okuvusa usinga, umphenyi nihlole izithombe - kufanele uqale kusukela imisebenzi bokuqala umqondisi omkhulu. Lezi "inyoni ekuseni" zihlanganisa movie "The Izinyathelo 39" (1935). Ngokwe-simo, protagonist ihlangabezana intombazane Annabella. Belle ucela ukulisindisa kokuphishekela ababulali, kodwa umfana kungokwalabo wathi ubuze. Ngesikhathi kushone umngane wakhe omusha uyafa kusukela okugwazwa, ubizwa ngenkani wonke nemibuthano esihogweni ukuze afakazele ukuthi akanacala. Alfred Hitchcock ngokuvamile baya trick protagonists yakhe ngokuphelele "eziyoncibilika 'e indima. Ngokwesibonelo, ngesikhathi ukuqopha of "The Izinyathelo 39", washo ukuthi wayelahlekelwe izihluthulelo kuwo ozankosi: Robert Donat futhi Medlin Kerroll waphoqeleka ukuba sisebenzise amahora ambalwa ngamaketanga.
Umdwebo "The Lady ibisinyamalala" (1938) - kahle udubule kahle ezicatshangwe ngokuningiliziwe umsebenzi ekuseni Alfreda Hichkoka. Indaba Umdlalo sika - ekunyamalaleni owesifazane nabanomusa ubudala, ehamba ngesitimela. Izikhangibavakashi ziqala ukuba aphenye ubugebengu, kancane kancane abahlala ehileleke ubunhloli nozungu. Le filimu Kwatholakala umbukwane: a baxgeki walibiza esinye sezibonelo best of izinga isiqondiso emlandweni cinema.
Ingrid Bergman e indima isihloko
Thanda izibukeli elula ukuqashelwa a baxgeki ovelele kungaba ukuziqhayisa Alfred Hitchcock. Zonke amafilimu Alfreda Hichkoka, uhlu okuyinto okwethulwa kulesi sihloko, kufanele wokubuyekezwa okuvumelekile izilaleli. Kuyinto ayihlukile neze futhi ifilimu "spellbound" (1945): itshela indaba ukulahlekelwa amandla okukhumbula ogulayo ukuthi ozishaya udokotela owaziwa. Owesifazane wezifo zengqondo, eyadlalwa Ingrid Bergman, uzama ukulondoloza umngane wakhe omusha kusuka necala lokubulala. Le filimu igcina ingaqiniseki: tetsamelilwati kuze kube sekupheleni ongayiqondi siyoba yini imiphumela yezenzakalo, ogama okufushane ilungile futhi kunokwenzeka kuphela.
Phela, u-Ingrid Bergman wayengomunye walaba izintandokazi Alfreda Hichkoka. Ngemva konyaka, lapho bammemela ukudlala kuleli ifilimu olandelayo onesihloko esithi "Notorious" (1946). Le filimu isitshela indaba nentombazane sebehlanjululwe wayala inhloli amaNazi ezingelwa eNingizimu Melika. Falling in love ne-ejenti friendly ke naye efuna ukubaleka kunesitha esiyingozi. Kusukela ngo-ifilimu ngako ku ibhomu lenuzi, u-Alfred Hitchcock yanquma ukucela iseluleko kaNobel Robert Andrews Millikan. PhD wasiza umqondisi ngikhetha ezindabeni eziningi, kodwa wenqaba oyolandisa imininingwane yokudala yisikhali esibulalayo.
Kulesi uhlobo, wathwebula amafilimu emangalisa kakhulu Hitchcock. Uhlu iqala ngamadijithi zakudala of umphenyi walo uhlobo "Esikhathini icala lokubulala, shayela" M "(1954) - kuwo ngekhono futhi ngokwemvelo salondoloza ubunye isinyathelo nendawo. Ingqikithi yalo ifilimu wukuthi uma owakwakho uthola umthandi ocebile, ke ngempela kumelwe abulawe. Ngakho, umnumzana kweqiniso ungagcina nodumo zezimali isimo sakhe, ukubuyisela isithunzi nenhlonipho yomphakathi. Inkinga kuyafana: lover lomkakhe - umbhali eliphethe abaseshi, bakwazi ukuchaza ngisho ubugebengu kuhlelwe kahle. Lesi sithombe abagxeki nezethameli bamukela ngomdlandla, siphawula ezimangalisa kakhulu umdlalo abadlali: Grays uKelli elapha ibhola, Ray Milland, futhi, ukusuka kuye ukuze ngizigcine nginolwazi oluhle.
Odakwe impumelelo, u-Alfred Hitchcock ngonyaka ofanayo anquma ukudubula le umphenyi futhi. Futhi benza: isithombe "Iwindi engemuva" (1954) uvelile wonke amathemba akhe. Izethameli crazy uthando ne umlingisi losemcoka - photographer, ngubani, ngenxa ophuke umlenze ziklebhukile izindlu isithukuthezi futhi ukungenzi lutho. zeviki Gray unika ukupenda ukuqapha yayo yansuku omakhelwane. ukuphila yaso ikude serene: isimo "smacks" ukubulala ezimbi. Isithombe kule mikhakha emine abaphakanyisiwe for indondo "Oscar", kodwa lalingafuni awatholi imiklomelo. Naphezu kwakho konke lokhu, namuhla ifilimu ubhekwa impahla emhlabeni cinema.
okuvusa usinga ongaqondakali
Uhlu Alfreda Hichkoka amafilimu siqhubeke uhlu imidwebo kulesi siqondiso uhlobo. Futhi isikhundla abasiholayo anayo ifilimu "Izinsolo" (1941) kanye Cary Grant in the indima abaholayo. iqhawe lakhe ethatha intombazane ethule, kodwa injabulo lemibhangqwana zithathelwe ngokwesaba njalo nangobuhlungu ukungabaza. Umlingani Useqala ukucabanga ukuthi umyeni wakhe abehlela ukubulala wakhe. Indima yowesifazane hypochondriac lolungenamaphutsa eyadlalwa Dzhoan Fonteyn: wanikezwa "Oscar" umklomelo. Isimanga siwukuthi kodwa lokhu umklomelo kuphela umdlali kusukela Academy, okuyinto waklonyeliswa amafilimu Alfreda Hichkoka.
Ababili ngaphezulu Thriller ezinhle kusukela umqondisi odumile: "Izihambi kwi zemininingwane" (1951) kanye "Vertigo" (1958). Eyokuqala isitshela indaba ababili afunda nabo-izihambi, abaye wazimisela uhambise ukubulala ephelele. Lena akuyona evamile banal movie "Okwethusayo", kodwa umsebenzi ezijulile ezingokwengqondo, wadala nokusetshenziswa amasu leticocwako ezibukwayo. Uzungu kugxile Thriller yesibili - nokutshontshwa umphenyi ngubani sebesaba into ephakeme nje, inkosikazi yomngane wakhe. Owesifazane uhamba edolobheni, umphenyi kuwo uwela - iqala maelstrom passion kanye imfihlakalo. "Vertigo" ekuqaleni abazange bathathe ukugxekwa ngokuthi i-movie inhlekelele. Kwakuthinta iminyaka eminingi kuphela kamuva, isithombe usezuze isimo wobuciko.
Nabo futhi, ngesikhathi esisodwa wajoyina uhlu Alfreda Hichkoka amafilimu ukuthi bayakufanelekela ezibonayo. Umqondisi waba nemizwa elingavamile amahlaya, comedy ngakho-ke engavamile: bona 'zinezikhathi abamnyama "ukubhinqa. Ngokwesibonelo, e-ifilimu "Trouble nge Harry" (1955), umlingiswa oyinhloko iwukuba isidumbu eponymous. Izakhamizi zaseFree ngamunye ngamunye bese uzama ukuthola nesikhumba sayo: ngamunye wabo kwakungenxa yesizathu esihle. Kodwa abafileyo 'anenkani "njalo kuyabuya. Alfred Hitchcock kubhekwe lokhu ifilimu omunye the best emsebenzini wakhe, naphezu ibhokisi ehhovisi elincane kanye nokubuyekeza ingxubevange baxgeki.
Siyaqhubeka sihlaziye emafilimini Hitchcock: uhlu uyaqhubeka the comedy romantic "Catch Isela" (1955). Abalingisi - ifilimu izinkanyezi okunjengalokho kuqala. Charming Grays uKelli nomlingani wakhe kusayithi isethi Keri Grant kuchazwa umbhangqwana othandanayo. He is isela, ubani amanga futhi ngokungafanele athola amaphoyisa esolwa ubugebengu, ke a lady omuhle ongenangqondo kwamsiza ukuthunjwa villain. Le filimu kwaba ekhethekile isiphetho abadlali: Makube kuwe umusa ngesikhathi ukuqopha wathola umyeni esizayo ngenkathi umsebenzi Cary Grant imzuzele umoya wesibili emva Ukuphumula eside.
Ukukhuluma amabhayisikobho engcono ka Hitchcock, uhlu kuqhubeka imisebenzi yakhe yisakhiwo sodumo. Omunye wabo kwakungu-isithombe "Rebecca" (1940). Lona esondweni lokuqala ifilimu, umqondisi wathwebula Hollywood futhi nguye kuphela okuyinto ithole "Oscar" "Kuhle Film Yonyaka" isigaba. Sakaza - intandokazi ladies Lourens Olive futhi Dzhoan Fonteyn ebukekayo. I protagonist, ngemva kokufa lomkakhe nov uthola injabulo emshadweni. Kodwa nonkosikazi awazange aqonde endlini, lapho, kubonakala, bonke abantu nezinto kuyinto shadow eyandulela wakhe oshonile.
"Rope" (1948) - enye ifilimu okhethekile. Kwakuwusuku esithombeni sokuthoma, ezithathwe umbala. Naphezu kwakho konke lokhu, azikho iziqephu nge kwenkundla fabulous. Indaba Umdlalo sika - indaba abafundi ababili abaphikisanayo ngaphambi kokufika izivakashi wabulala umngane nje ukuzizwa siphakeme. Lesi sithombe se-ezintsha kanye zokuhlola. Waba ngowokuqala emlandweni cinema kuhlanganisa isibhamu eside: kubonakala sengathi esikhathini ifilimu akukho ukufakwa, futhi yena waqonda njengoba ungaphazanyiswa isinyathelo ezigcawugcawu.
Izakhi ngenxa yokwesaba horror avame ukusetshenziswa Alfred Hichkok. horror movie, uhlu elitholakala eziningi izilinganiso movie, futhi liqukethe izihloko imidwebo yakhe. Ngokwesibonelo, "Psycho" (1960). Abagxeki walibiza ifilimu ukuthi ine cinema phakade esishintshile kanye nezethameli elika, umsebenzi okubi kakhulu ezintsha futhi owaziwa. I lwendaba lumayelana nonobhala osemusha, ukhathele uthando indoda eshadile, ukweba emsebenzini omningi futhi uqala on a run. Endleleni wayeka ehhotela edolobheni, lapho ayekhona wamukelekile ngesikhathi inkosi abasha. Khona-ke indaba iqhubeka ezingalindelekile futhi okungavamile.
Thriller yezokusebenza kwenqondo, asemngceleni horror, akuyona kuphela ikhono opharetha, kodwa futhi ezinkulu umdlalo abadlali - ke inkanyezi Anthony Perkins, Vera Maylz futhi UJanet Leigh. Umbhali Alfred Hitchcock ngakho sina asabela ngayo nesitatimende izithombe wathenga cishe zonke izincwadi lapho le bhayisikobho eyayenziwe. Ngale ndlela, wazama ukunciphisa isibalo sabantu ongabazi isiphetho. Le filimu "Psycho" iqoqo izandiso, kodwa abawona eduze umsebenzi umqondisi ovelele: Elisabeth Hitchcock sonke isikhathi wayethembela ncamashi emagumbini ezikude kakhulu zaleli psyche womuntu, ukudala okwakwenzeka.
Vusa, bopha yokwesaba okunamathelayo futhi thwebula Hitchcock okukhulu. Uhlu amafilimu esesabisayo kakhulu ngokuqiniseka uyaqhubeka yokudweba "The Birds" (1963). Alengayo esekelwe Indaba ngu Daphne du Maurier, itshela indaba socialite, okuyinto endleleni ku Emaphethelweni ukuhlaselwa Gull. Futhi lokhu kumane nje kuyisiqalo loko. Kakade isiqephu esilandelayo umbukeli uyaqaphela ukuthi zonke izinyoni zazo zonke emhlabeni alwa esintwini. Izinhlamvu main eyadlalwa Dzhessika Tendi, Rod Taylor futhi Tippi Hedren.
"Izinyoni" - hhayi kuphela intandokazi kunazo movie izilaleli, kodwa futhi master edume kakhulu futhi engaqondakali cinema umsebenzi. Uma isithombe sangaphambilini siyenzeka logic, ngisho noma ngezinye izikhathi kube lula futhi eyinkimbinkimbi, nakhu lingekho ngokuphelele. Simangalele ukuphangisa: kuyinto izidalwa kuhle nabangenacala enezimpiko can ubudlova nonya futhi akunasidingo? Riot izakhi kuyathakazelisa futhi kubonisa ukuthi bangaki abantu Akunanto phambi emvelo. Abantu bazizwa bezibona amakhosi omhlaba, akhohlwe ukuthi zingabantu ofayo futhi landscaped emhlabeni zabo - usengozini futhi ingahlali kahle. Ukuzaliseka iqiniso - leitmotif yesithombe.
"Madness" (1972) kanye "uzungu umndeni" (1976) - amafilimu sokugcina Hitchcock. Uhlu imisebenzi kuleli ekupheleni. Bobabili imidwebo kukhona Thriller ezimatasa. "Uzungu Umkhaya" abagxeki baye ngokuthi "gourmet ukudla, senzelwe gourmet -. Elisabeth ubudala abayithandayo" Lapha enkulu master izithako ngobuciko elixutshwe ezifana okuthumba, ukubulala, ukubamba inkunzi kanye nokuqala umlilo ngamabomu. Esithombeni zonke izinto ezingumsuka ezingeni eliphezulu kakhulu: kusuka ezindaweni zombhalo ziphethe ngengoma.
Ngokuqondene 'Madness ", ke igcwele eyizintandokazi amasu abo" Hitchcockian "kanye motifs. Indaba Umdlalo sika - indaba Richard, osolwa uchungechunge kubulawa ngonya kwabazali bami abesifazane - bonke waklinywa izibopho. Izinsolo luwela indoda emva nowakhe umfazi wayephakathi wezisulu Maniac. Richard isigwebo sasejele eside, kodwa kukhona kwaba, abaseshi baqale ukungabaza icala lakhe. Le filimu igcina ingaqiniseki, bayamangala esonta ezingalindelekile yomugqa wendaba kanye horror izakhi, ezifana, isimiso, kanye nazo zonke ezinye usebenza Alfreda Hichkoka - wayeyisazi ebhayisikobho.
"Ayikho indlela": nabalingisi Starring the comedy ongafi L. Gaidai
Dzherri Saynfeld. Biography, Filmography, amaqiniso athakazelisayo ngokuphila nosomahlaya
Ellen Pompeo - inkanyezi uchungechunge TV Owesifazane ojabule
Ukuqapha kwezinto eziphilayo: izinhlobo nezinhlelo zokusebenza
Kanjani ukwakha ifolda "Android" esikrinini
Indlela ukususa ukuzipha ifayela?